34 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Morekɔ Kanaan asase so.+ Asase yi na ɛbɛyɛ mo agyapade,+ Kanaan ne n’ahye+ nyinaa. 3 “‘Anafo fam hye no bɛfa Sina sare so wɔ Edom+ ho akosi Nkyene Po+ no ano wɔ apuei fam. 4 Na ɔhye no bɛdan afi Akrabim+ anafo akɔfa Sina na ɛnam hɔ akɔ Kades-Barnea+ anafo. Ebefi hɔ akɔfa Hasar-Ada+ akɔ Asmon. 5 Na ɔhye no bɛdan afi Asmon akɔfa Egypt subon+ no ho akɔ Po Kɛse+ no ano. 6 “‘Atɔe fam hye+ ne Po Kɛse no, mpoano hɔ. Eyi bɛyɛ mo hye wɔ atɔe fam. 7 “‘Atifi fam ɔhye no ni: Munsusuw mfi Po Kɛse no ano nkosi Bepɔw Hor+ ho. 8 Afei momfa mfi Bepɔw Hor ho nkɔ Hamat,+ na munsusuw mfi hɔ nkɔ Sedad.+ 9 Na ɔhye no bɛtoa so afi Sifron akosi Hasar-Enan.+ Eyi bɛyɛ mo hye wɔ atifi fam. 10 “‘Afei apuei fam ɔhye no nso, munsusuw mfi Hasar-Enan nkosi Sefam. 11 Momfa mfi Sefam nkosi Ribla wɔ Ain apuei, na emfi hɔ nkɔ Kineret+ po no ho wɔ apuei fam. 12 Na ɔhye no ntoa so nkɔ Yordan nkosi Nkyene Po+ no ho. Eyi ne mo asase+ no ahye nyinaa.’” 13 Enti Mose ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ: “Eyi ne asase a mobɛbɔ ntonto de akyɛ+ no. Saa na Yehowa ahyɛ sɛ wɔmfa mma mmusua akron ne fã no.+ 14 Ruben asefo mmusua ne Gad asefo mmusua ne Manase abusuakuw fã no de, wɔanya wɔn agyapade dedaw.+ 15 Mmusua abien ne fã yi anya wɔn agyapade dedaw wɔ Yordan ho wɔ Yeriko apuei fam.”+ 16 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 17 “Mmarima a wɔbɛkyɛ asase no ama mo no din ni: Ɔsɔfo Eleasar+ ne Nun+ ba Yosua. 18 Afei munyi ɔpanyin biako mfi abusuakuw biara mu mma wɔnkyɛ asase no.+ 19 Mmarima no din ni: Yuda abusuakuw,+ Yefune+ ba Kaleb; 20 Simeon abusuakuw,+ Amihud ba Semuel; 21 Benyamin abusuakuw,+ Kislon ba Elidad; 22 Dan abusuakuw+ mu no, ɔpanyin a woyii no ne Yogli ba Buki; 23 Yosef mma+ mu no, ɔpanyin a woyii no fii Manase abusuakuw+ mu ne Efod ba Haniel; 24 Efraim abusuakuw+ mu no, ɔpanyin a woyii no ne Siftan ba Kemuel; 25 Sebulon abusuakuw+ mu no, ɔpanyin a woyii no ne Parnak ba Elisafan; 26 Isakar abusuakuw+ mu no, ɔpanyin a woyii no ne Asan ba Paltiel; 27 Aser abusuakuw+ mu no, ɔpanyin a woyii no ne Selomi ba Ahihud; 28 Naftali abusuakuw+ mu no, ɔpanyin a woyii no ne Amihud ba Pedahel.” 29 Eyinom na Yehowa hyɛe sɛ wɔnkyɛ Kanaan asase no mma Israelfo.+